ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်သူတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွင်ငွေပေးချေ?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 29 2019 |3မိဖတ်ပြီးသား
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က, ကျွန်မပတ်စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူသုံးကြိမ်ထွက်သွားလေ၏. ကျွန်မအရာအားလုံးများအတွက်ပေးဆောင်င့်, သူမသည်သူမ၏ပိုက်ဆံအိတ်မေ့နေတာလားင့်သဘောပေါက်လာသောအခါတနင်္ဂနွေနေ့နံနက်တစ်ဒါဇင် bagels အပါအဝင်. သူမသည်ရက်ရက်ရောရောမယ့်နေ့စွဲကိုကောက်ဖို့ကမ်းလှမ်း.
သူမသည်ပျော်စရာလိုကြားနေရပါတယ်တဲ့ပြဇာတ်၏စကားကိုကြားသောသူကိုငါ့အားလျှောက်ချင်သည်နက်ဖြန်နေ့၌အလုပ်မှာငါ့ကိုခေါ်. သူမသည်အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ဟုဆိုသည်နှင့်ရရှိနိုင်သောလက်မှတ်များရှိကြ၏ဆိုရင်ကျနော်ထွက်ရှာနိုင်လျှင်ဟုမေးမြန်း. ပြဿနာမရှိပါဘူး. ငါကဇာတ်ရုံကိုခေါ်သာခြောက်လလက်ဝဲရှိခဲ့သည်သင်ယူ. လုပ်ဖို့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆိုတာဘာလဲ? ကြီးကြီးမားမားမစာချုပ်, ကျွန်မလက်မှတ်တစ်စုံဝယ်ကျွန်တော်ထွက် သွား. ရှေ့တော်၌အသူမကညစာကောက်င့်နေသေးတယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးနောက် $40 အစားအသောက်, သူမဆင်းသူမ၏အကြွေးဝယ်ကဒ်ချခြင်းနှင့်ရေချိုးခန်းသို့သွားကြ၏. သူမနောက်ကျောလာသောအခါ, ကျွန်မသူကိုကောက်ဖို့ငါ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ဆေးမှုများခွဲထွက်ခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိ. သူသည်ကျွန်မကိုငေးကြည့်နေမိတယ်ဟုအပေါ်သို့, တစ်ဦးအဆိပ်၏တစ်တန်နဲ့မအမြီးအမောက်၏ဖျက်စီးနဲ့: '' ငါသည်အဘယ်သို့ဖြစ်ကြောင်းကို, သင့်ရဲ့သကြား mama?!’
အင်း, ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းအမြဲတမ်းလောကရှိအကျိုးအရှိဆုံးအရာမဟုတ်ပါ. ဒါပေမဲ့သင့်အဘယ်သို့ပြုနေကြသည်? ကျွန်မဘာအကြောင်းအံ့သြရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ် “တရားမျှတတဲ့” ငါအမွေဆက်ခံမယ့်စနစ်ကပွေ့ဖက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ. ဒီစနစ်ထဲမှာ, ယောက်ျားတစ်ယောက်ယုံမှားဖွယ်မရှိချေငွေပေးချေ, နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှပေးချေရှိမရှိကို, သူသည်နောက်ပြောယူဆ. အနည်းဆုံးပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်ရက်စွဲများအပေါ်. သို့မဟုတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူမရယူရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသောရဲ့အဖြစ်. ဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်း. ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်မူတည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစောင့်ချပါမဟုတ်လျှင်သိနှင့်သူမ၏တစ်ဦးကို check ကောက်ဖို့ခွင့်ပြုဘယ်တော့မှမနိုင်. ပြီးတော့အားဖြင့်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ egalitarian အပြုအမူအတွက်ဆင်ခြေပေးဖို့မကြာခဏသိပ်နောက်ကျင်.
ဤအချက်များအားလုံးညာဘက်တစ်ဦး quandary သည်နှင့်အဘယ်သူမျှမမှန်ကန်သောအဖြေလည်းမရှိ. ဝေးလွန်းအများအပြားရက်စွဲများအပေါ်န်သူတစ်ယောက်အဖြစ်, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောနှစ်ဖက်စလုံးမှပုံပြင်များနှင့်တိုင်းထောင့်ကြားဖူးတယ်. သို့သော်ယုတ္တိဗေဒကတည်းကဒီဘုံ၌များစွာသောကစားရဖို့မထင်ပါဘူး, ကျနော့်ကြောင့်တချို့မျက်နှာအချိန်ပေးပေါ့.
ဟုတ်ကဲ့, နှင့်, ယေဘုယျအားဖြင့်, သောအမှုဖြစ်ပါသည်. ရက်ရက်ရောရောဖြစ်ခြင်း, အထူးသဖြင့်သင်ဂရုစိုက်တစ်စုံတစ်ဦးမှ, တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားမှုဖြစ်ပါသည် – ညာဘက်မျှချီ, ကျွန်မကပြောသည်င်, အရာအားလုံးတစ်စုံတစ်ဦးသောအားဖြင့်ပေးချေပြီးမှနှင့်အတူ.
ဟုတ်ကဲ့, ကြောင်းကို၎င်း, ခင်ဗျားမမွေးဖွားမီလမ်းတည်ထောင်ခဲ့သောထုံးတမ်းစဉ်လာမယ့်. ကမတိုက်ပါနဲ့, ့အပြုံးဖြင့်သာလုပ်ပါ, သင်သည်မကျင့်လျှင်ဖြစ်ပေါ်စေ, သင်သည်အခြားရက်စွဲဆိုတော့မရ.
ရင်း: သူကပေးဆောင်ပေးသင့်တယ်, အထူးသဖြင့်အစမှာ.
ဒီလောဂျစ်အနည်းငယ် dicier ဖြစ်ပါသည်. အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသည်လူရတော့မယ်? က chivalrous မို့လို့? chivalry ယောက်ျားအလုပ်လုပ်ခဲ့အချိန်တွင်စတင်အမျိုးသမီးများမပြုဘူးသောကိုစဉ်းစားပါ. အမျိုးသမီးများ, တိုက်ရိုက်, မဆပ်နိုင်မဲ့. ထိုသို့, 'check ကောက်နေယောက်ျားလိုအပ်မှုအထဲကအပင်ပေါက်သောအခါမြေ, မကြင်နာမှုထွက်. ဒါဟာကတည်းကလူကြီးလူကောင်းရဲ့ code သို့ပြဌာန်းခဲ့သည်, မေးခွန်းကိုအလွန်ဆင်းရဲအရသာအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော. ကျနော်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသည်မှာမဟုပ်ဘူး, သင်မူကား, ငါသည်အပင်တက်သို့ဆောင်ခဲ့တယ်ကဘယ်လောက်အမျက်တော် ထွက်. ကြည့်ရှု?
ဘာဖြစ်သလဲ? ရှေ့တွင်သင်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲများအတွက်ပေးဆောင်ကြောင်းဆိုသည်ဆိုရင်, သူသည်ကိုသင်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်ဆပ်ဖို့မျှော်မှန်း, သင်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်ဆပ်ဖို့တတ်နိုင်, ထို့နောက်သူကပြောတယ်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲများအတွက်ပေးဆောင်.
ရင်း: သူကိုဘာကြောင့်အရေးမပါဘူး. တစ်ဦးကလူကြီးလူကောင်းအမြဲငွေပေးချေ.
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုငွေဟာတတန်ကိုပေးလျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုအာမခံနိုင်, ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမသောက်နှင့်ရေပူစမ်းကုသမှုများအတွက်ပေါက်နှင့်သင်ကြမည်မှာသေချာပါသည်ဖြစ်ကြ၏မင်းသမီးကဲ့သို့သင်တို့ပြုမူဆက်ဆံရန်သူ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အပျော်အပါးင်. ဒါပေမယ့်စျေးပေါဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲသောဖြစ်ခြင်းအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိင်. စျေးပေါကောင်လေးသူကိုစျေးသက်သာကြက်သားအမိန့်လိုက်တဲ့အခါငါးကိုဆပ်ဖို့မိမိအရက်စွဲမေးတယ်ဆိုလိုတယ်. ညံ့ဖျင်းသောသူတစ်ဦးလ၌ငါးခုရက်စွဲများအဘို့အဆပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကောင်လေးဒုက္ခငှားရာတွင်ရှိကြောင်းကိုဆိုလိုသည်. သူ့ရဲ့အနေအထားတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်းထား: ထို့နောက် alternate စစ်ဆေးမှုများကိုမှမကြွင်းအဘို့သူ့ကိုအပြစ်တင်ဖို့ခက်ကန်.
ငါ့အဖြေဖြစ်သည်, မအံ့သြဖွယ်, တစ်ဦး equivocation. အားလုံးတယောက်ကိုတယောက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားကြရအောင်. ယောက်ျားတွေ, တတ်နိုင်သမျှရက်ရက်ရောရောဖြစ်, သူသည်သင့်ကိုမမြျှောလငျ့မသာသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအမှန်တကယ်ကျိုးနပ်မယ့်ကြောင့်ဆိုသော် “ကောင်လေးဖြစ်” နှင့်သူမ၏အသက်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါ. အမျိုးသမီးများ, သူဖြစ်ရချင်ပါတယ်ကဲ့သို့ chivalrous ဖြစ်အံ့သောငှါနည်းလမ်းမရှိကြောင်းအဆိုပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသို့မဟုတ်ကျောင်းဆရာမှကိုယ်ချင်းစာနာဖြစ်. သင်တို့သည်ငါတို့၏သကြား MaMa မဖြစ်စေခြင်းငှါ, ခွင့်ပြုဘို့ပေမယ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ ATM စက်ရဲ့ယ်ကြောင့်မခံမယူကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး, အဆင်ပြေ?